Carb မန်နေဂျာ - Keto & အနိမျ့ Carb အစားအသောက် Tracker | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ကျန်းမာရေး & Fitness Apps ကပ » Carb မန်နေဂျာ - Keto & အနိမျ့ Carb အစားအသောက် Tracker
Carb မန်နေဂျာ - Keto & အနိမျ့ Carb အစားအသောက် Tracker APK ကို
Carb Manager ဖြင့် 110 ပေါင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသူအသုံးပြုသူ KMKeto ဖို့နဲ့ Big ဂုဏ်ယူပါတယ်။ သူမရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုပြောင်းရွှေ့ကျွန်တော်တို့ကိုမှုတ်သွင်း။ သွားကြဖို့လမ်း, KM! Carb Manager ကိုကမ္ဘာ့အလွယ်ကူဆုံးနှင့်အနိမ့် carb အစားအစာသို့မဟုတ် keto အစားအစာအပေါ်မည်သူမဆိုအဘို့အနိမ့် carb tracker နှင့်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Micro စနစ်နဲ့အခြားသောတန်ပြန်အရှိဆုံးပြည့်စုံ။ ကျနော်တို့အမှတ်တံဆိပ်အမည်အားထုတ်ကုန် Atkins အစားအသောက်များတွင်ထုတ်ကုန်များနှင့်စားသောက်ဆိုင်ခအပါအဝင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာဘေ့စနီးပါး 1 သန်းမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုအစားအစာများ, ပြုစု, သင်၏အနိမ့် carb အစားအသောက်များတွင်လူနေမှုပုံစံစတဲ့အတူအောင်မြင်တစ်ခုမရှိမဖြစ်အရင်းအမြစ်ကိုဖန်တီးထားပါတယ်။
ပိုက်ကွန်ဘိုဟိုက်ဒရိတ်တန်ပြန်အဖြစ်, Carb Manager ကိုတုနှိုဖြစ်ပါတယ်။ အနည်းငယ်ဘုံဘိုင်နှင့်အတူ, သငျသညျဘုံအစားအစာများ, စူပါမားကတ်အစားအစာများနှင့်စားသောက်ဆိုင်ဟင်းလျာများကိုရှာဖွေရန်လွယ်ကူပါဝင်သောကျွန်တော်တို့ရဲ့အစာရှောင်ခြင်းနှင့်ကျယ်ပြန့်အစားအစာကိုဒေတာဘေ့စ, ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ လျင်မြန်စွာ carbs ရေတွက်ဖို့ဘားကုဒ်ကိုစကင်နာကိုသုံးပါ။ သင်လုပ်နိုင်သည်ကိုလည်း input ကိုသင့်ကိုယ်ပိုင်ထုံးစံအစားအစာများ, ဒါမှမဟုတ်အနိမ့် carb ချက်ပြုတ်နည်းများနှင့်အစားအစာအတွက်အစုအဝေးကိုအစားအစာများ။ ထို့အပြင်ငါတို့သည်သင်တို့၏စားနပ်ရိက္ခာဒိုင်ယာရီမှထည့်သွင်းဖို့အားလုံးအဆင်သင့်, ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အစာအာဟာရအချက်အလက်နှင့်အတူ 350,000 ကျန်းမာချက်ပြုတ်နည်းများထည့်သွင်းပေးထားတယ်။
ဤသည်အစားအသောက်များတွင် tracker ရှာဖွေမှု, ကင်မရာ, အသံမှတဆင့်အစားအစာများကို log မှ State-Of-The-Art နည်းလမ်းများပါဝင်သည်။ အာဟာရအင်ဖို log တစ်ဘားကုဒ်ကိုစကင်ဖတ်။ အလျင်အမြန် carbs တွက်ချက်ရန်သင့်ပန်းကန်၏ရုပ်ပုံ SNAP ။ တောင်မှသင်စားရကြ၏ဘယ်သို့ဆိုရန်သင့် device ကိုရဲ့မိုက်ကရိုဖုန်းကိုသုံးပါနှင့်ကျွန်တော်တို့ဟာချက်ချင်းကိုသင်၏အစာကို log က add ပါလိမ့်မယ်။
သို့သော်တစ်ဦး carb ဂဏန်းတွက်စက်ထက် ပို. ပင်, Carb Manager ကိုကျန်းမာနိမ့် carb မြင့်မားသောအဆီဓာတ်စာ (LCHF) လူနေမှုပုံစံစတဲ့အသကျရှငျအဘို့သင့်တစ်နေရာတည်းမှာဦးတည်ရာဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အနိမ့် carb အစားအသောက်များတွင်ဆောင်းပါးများ, ဖိုရမ်များ, ချက်ပြုတ်နည်းများတစ်မုန့်ညက်စီမံ, e-စာအုပ်နှင့်အများကြီးပိုကို bundle ပါတယ်။
သငျသညျ, တစ်ဦး keto သို့မဟုတ် ketogenic အပေါ် Paleo, Atkins, Whole30 သို့မဟုတ်အခြားအနိမ့် carb အစားအစာများမှာပဲဖြစ်ဖြစ်, Carb Manager ကိုသငျသညျလှုံ့ဆော်မှုနှင့်သင့်ကျန်းမာရေးကိုသတိထားနေဖို့ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ Carb Manager ကိုလည်းပရိုတိန်း, အဆီနှင့်ကယ်လိုရီအပါအဝင်, သင့်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Micro စနစ်နဲ့အခြားသောသူအပေါင်းတို့ကိုခြေရာခံနိုင်ပါတယ်, ဒါကြောင့်သင်စနစ်တကျသင့်ရဲ့အစားအစာဟန်ချက်မျှအောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Carb Manager ကိုလည်း carb စားသုံးမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့ရေတွက် carb များအတွက်ဆီးချိုရောဂါထောင်ပေါင်းများစွာ၏အားဖြင့်အသုံးပြုသည်။ သင်၏ကျန်းမာရေးတစ်ခုခြုံငုံသုံးသပ်ချက်အရနှင့်သင့်ဆီးချိုရောဂါစီမံခန့်ခွဲကူညီဖို့သွေးတွင်းသကြားဓာတ်, ketones နှင့်ပိုက်ကွန်ကို carbs ကိုခြေရာခံ။
သင့်ရဲ့အသားတင် carbs သို့မဟုတ်စုစုပေါင်း carbs နှင့်ကိုယ်အလေးချိန်ပန်းတိုင်များကိုသတ်မှတ်
နီးပါး 1 သန်းရှာရန်မှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြု carb ရေတွက်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိကျမှန်ကန် search engine ကိုအသုံးပြုပါ, ဒါမှမဟုတ်ထုတ်ကုန်ဘားကုဒ်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေး
* ချက်ချင်းက log ရန်သင့်အစားအစာတစ်ခုပါ pic SNAP
အစားအစာများကိုရိုက်ထည့်ပါသဘာဝဘာသာစကားနဲ့အသံသစ်ထုတ်လုပ်ရေးကိုသုံးပါ။ ကိုယ့်မုန့်ညက်ကိုဖော်ပြရန်ကဲ့သို့ "ဒီနေ့ကျွန်မနေ့လည်စာများအတွက်အနိမ့် carb tortilla နှင့်ဒိန်ခဲကိုစားကြ၏" နှင့်ကျနော်တို့ကိုအလိုအလျောက်ထည့်သွင်းပါလိမ့်မယ်။ *
350,000 အနိမ့်ဘိုဟိုက်ဒရိတ်များနှင့်ဓါတ်ပုံများနှင့်ညွှန်ကြားချက်နှင့်အတူ Paleo ချက်ပြုတ်နည်းများကျော်။ တဦးတည်းကိုထိပုတ်ပါနှင့်သင်၏နေ့စဉ်မှတ်တမ်းမှသူတို့ကိုထည့်ပါ။ *
စုစုပေါင်း carbs, အသားတင် carbs, အဆီ, ကယ်လိုရီ, ပရိုတိန်းနှင့် 30 + အာဟာရအပါအဝင်ကြည့်ရန်နှင့်လမ်းကြောင်းအစာအာဟာရ,
နေ့ရက်တိုင်းသင့်ရဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ Micro စနစ်နဲ့အခြားသောမြင်ယောင်နှင့်အချိန်ကျော်
သင့်ရဲ့စံပြဘာလို့လဲဆိုတော့ Micro စနစ်နဲ့အခြားသောအချိုးသင်သည်အသီးအသီးအဘို့အလိုခငျြကယ်လိုရီအဘယ်သို့% ပေါ်တွင်အခြေခံတွက်ချက်
လှပသောဇယားနှင့်သင်၏အလေးချိန်, BMI ၏အတိုင်းအတာကိုသိမ်းဆည်းထားပါနှင့်ထို့ထက် ပို.
လေ့ကျင့်ခန်းကိစ္စရပ်များ! log မှဘုံလေ့ကျင့်ခန်းရာပေါင်းများစွာကနေ Pick
Voice ကိုသင့်ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်း log ။ ဥပမာ, "ယနေ့ငါသုံးမိုင်ပွေးယောဂ၏ 20 မိနစ်လုပ်ခဲ့တယ်" *
သူငယ်ချင်းများနှင့် Carb Manager ကအသိုင်းအဝိုင်းထောက်ခံမှုများအတွက်, အကြံပေးချက်များနှင့်လှုံ့ဆျောမှုနှင့်အတူချိတ်ဆက်ပါ
LOW CARB Diet သည်ပြီးပြည့်စုံ ASSISTANT
Carb Manager တွင်စုစုပေါင်းနှင့်ပိုက်ကွန်ကို carbs ကိုခြေရာခံ
အနိမ့် carb ကျွမ်းကျင်သူများအားဖြင့်သီးသန့်အကြောင်းအရာ Read - နောက်ဆုံးပေါ် keto အစားအသောက်များတွင်သတင်းအပေါ်ရက်စွဲအထိနေဖို့
* အချို့အင်္ဂါရပ်န့်အသတ် access များအတွက်ပရီမီယံကြေးပေးသွင်းလိုအပ်သည်။
အဆုံးစွန် carb စီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းချက်များအတွက်, ပရီမီယံမှ upgrade
Access ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ Full-featured ကို web site ပေါ်တွင်အားလုံးသင့်ရဲ့ဒေတာကို
Unlimited စကားသံကိုသစ်ခုတ်ခြင်းနှင့်သဘာဘာသာစကား input ကို
Unlimited တစ်ဦးပါ pic အစားအစာသစ်ထုတ်လုပ်ရေးဖမ်းယူ
Unlimited အနိမ့် carb ချက်ပြုတ်နည်းများရှာဖွေမှုများကို
ကို web sites များအတွက်သွင်းကုန်ချက်ပြုတ်နည်းများ
အဆိုပါ KetoGenius အစားအသောက်အစီအစဉ်တစ်ခုပြည့်စုံ keto အစားအသောက်များတွင် Kickstarter အစားအစာလမ်းညွှန် Get
30 + အာဟာရနှင့်ကျန်းမာရေးအရေးပါသောအများအတွက်ဇယားများနှင့် set ကိုရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် - အပြည့်အဝကျန်းမာရေးခြေရာခံခြင်း Enable
သငျသညျ Keto, အနိမ့် carb (LCHF) များမှာပဲဖြစ်ဖြစ်, Whole30, ဘာလို့လဲဆိုတော့ Micro စနစ်နဲ့အခြားသော, ဒါမှမဟုတ်တခြားဘာမှမရေတွက်, Carb Manager ကသင်သည်သင်၏အစားအစာများ၏ထိန်းချုပ်မှုယူကူညီပေးရန်နှင့်ထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းအဲဒီ carbs ကန်ပါလိမ့်မယ်။ အခုတော့လတ်ဆတ်တဲ့ start နှင့်အနိမ့် carb တော်လှန်ရေး join ဖို့ပြီးပြည့်စုံသောအချိန်ဖြစ်ပါသည်။
ဒါက update ကိုလည်းပါဝင်သည်:
* အမျိုးမျိုးသော fixed bug ကိုများနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်မှု!
Carb မန်နေဂျာ - Keto & အနိမျ့ Carb အစားအသောက် Tracker
12.42 ကို MB
Wombat Apps ကပ LLC
Carb Manager ကို App ကိုသင်ခန်းစာ